5 + 1 safidy hafa amin'ny Evernote izay hamela anao hamokatra bebe kokoa | Vaovao IPhone
5 + 1 safidy hafa amin'ny Evernote izay hahafahanao mamokatra bebe kokoa
Raha resaka fampiharana fanamarihana no resahina, ny fampiharana voalohany amin'ny sehatra an-tserasera dia ny Evernote. Amin'ity rindranasa ity dia afaka mandray an-tsoratra isika, manitsy azy ireo, manampy ny atiny rehetra ary manome azy ireo amin'ny fitaovana saika misy rafitra fiasa. Fa satria ny fampiharana dia tena tsara dia tsy midika hoe ho toy izany ny mpampiasa rehetra. Raha na inona na inona antony tsy tianao ilay fangatahana maka naoty momba ny elefanta dia hanolotra soso-kevitra maromaro amin'ity lahatsoratra ity izahay alternatives to Evernote.
Alohan'ny hanombohantsika dia tiako ny milaza ity lisitra manaraka ity tsy araka ny filaharanyRaha tsy izany, ahoana no nahatongavany tamiko? Ny sasany amin'ireto safidy manaraka ireto mankany Evernote no tsara indrindra notsapako manokana, ny sasany nanolotra azy ireo tamiko ary ny hafa kosa miseho ho toy ny safidy tsara indrindra amin'ny tranokala malaza izay ny antony tokana ananana dia ny fanolorana vahaolana hafa. Ho hitanao ny antony nametrahany ny "5 + 1 hafa" amin'ny lohateny rehefa hitanao ilay voalohany.
1 Solony hafa amin'ny Evernote ho an'ny iOS
1.3 Google foana
1.6 Diary iray + Fanamarihana
Solony hafa amin'ny Evernote ho an'ny iOS
Tamin'ny volana Jona 2015 dia nilaza taminay momba ny fampiharana vaovao i Apple IOS Notes izay tonga niaraka tamin'ny iOS 9. Na dia marina aza fa mety ho lavo ireo mpampiasa be mpitady indrindra, dia marina ihany koa fa apetrakao amin'ny alàlan'ny default ao amin'ny iOS izy ary manolotra safidy marobe, toy ny manampy lahatsoratra (DOH!), sary, sary, horonan-tsary na, avy amin'ny iOS 9.3, ny fahafaha-miaro ny naotinay amina kaody na Touch ID.
Etsy ankilany, hanana ihany koa isika naoty rehetra namboarin'i iCloud, izay ahafahantsika manatona azy ireo manararaotra ny iray amin'ireo teboka matanjaka indrindra ao Apple: ny tontolo iainany. Tsy misy isalasalana, ny fampiharana iOS zanatany no zavatra voalohany tsy maintsy andramantsika raha mitady fomba hafa mankany Evernote isika.
Mandra-pahatongan'ny fampidirana ny iOS 9 sy ny rindranasa Notes vaovao, ny rindranasa izay nampiasaiko mba hamenoana ny lesoka an'ny rindran-damina dia Notability. Tsy afaka milaza izahay fa rindranasa tsy lafo io, nefa manome safidy marobe, toy ny sora-tanana, karazana endritsoratra maro, soratra nasongadina, fanafarana / soratana amin'ny PDF ary fampifanarahana nataon'i iCloud. Ny ratsy indrindra dia azy vidiny 7.99 € fa, toy ny zava-drehetra, mety ho toa tsy lafo izany raha manararaotra azy isika.
Ao amin'ny lisitry ny rindranasa famokarana dia tsy maintsy misy zavatra noforonin'i Google. Raha manadino isika fa hahafoana ny fiainantsika manokana, safidy tsara ho an'ny Evernote ny Google foana. Tahaka ny rindrambaiko rehetra an'ny orinasa ankehitriny izay an'i Alphabet, Google Keep dia fampiharana maimaim-poana ary raha eto amin'ity lisitra ity dia manome antsika fahafaha-mandray an-tsoratra, mamorona lisitra, mizara azy ireo ary mampifangaro azy ireo amin'ny rahona. Tsy ilay fampiharana misy safidy be indrindra io, fa afaka manompo antsika tonga lafatra, indrindra raha ny Google Drive no rahona ankafizintsika.
Google Keep: naoty sy lisitramaimaim-poana
Raha manolotra safidy hafa amin'ny Evernote i Google, dia tsy hihena ny Microsoft. Manolotra antsika ny mpamorona ny birao fiasan'ny birao be mpampiasa indrindra eto an-tany OneNote, fampiharana izay ahafahantsika misambotra sy mitahiry na inona na inona, mandamina ny naoty ao anaty rahona, mamorona naoty zaraina ary mahazo ny naoty avy amin'ny fitaovana rehetra. OneNote koa a free application, raha mbola mieritreritra isika fa ny vola ihany no fomba fandoavana.
Raha fangatahana faran'izay kely sy mora ampiasaina ny zavatra ilaintsika, Simplenote liana izahay. Araka ny tondroin'ilay anarana, Simplenote dia fampiharana tsotra be izay mifantoka amin'ny fahombiazana sy ny fahazavana. Hotsongaina ao anaty rahona ireo naotinay ary ho an'ny a vidiny 0 €. Tokony ho ekena fa ity rindranasa ity dia tsy manome fahafaha-manao betsaka, fa io koa no minimalista faran'izay kely hitantsika ao amin'ny App Store.
Diary iray + Fanamarihana
Ny safidy tsara hafa an'ny Evernote dia Andro iray. Na dia tsy fampiharana maimaimpoana koa aza dia amidy amin'ny a vidin'ny € 4.99. Amin'ny maha-rindrambaiko karama izay mitovy amin'ny Notability, ny Andro Voalohany dia hanolotra safidy marobe ho antsika, toy ny fanampiana sary, famoronana diary marobe, fampahatsiahivana manokana na fanakanana amin'ny kaody / Touch ID.
Inona no safidy Evernote tianao indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » 5 + 1 safidy hafa amin'ny Evernote izay hahafahanao mamokatra bebe kokoa
Tsy hita ny UPAD (tiako indrindra)
Tsaho: Ny iPhone amin'ity taona ity dia hatao hoe iPhone 6SE ary haseho amin'ny 16 septambra
Ireto ve no sary voalohany amin'ny iPad Pro 2 12.9-inch?